SHOCK ABSORBERS Mpanamboatra sy mpamatsy - China SHOCK ABSORBERS Factory
Twin Tube Shock Absorber Ny famolavolana fantsom-bokatra kambana dia misy fantsona anatiny fantatra amin'ny anarana hoe fantsona faneriterena sy fantsona ivelany fantatra amin'ny anarana hoe fantsona fitehirizana. Ny fantsona ivelany dia fitehirizan-tsolika. Rehefa miakatra sy midina ilay tsorakazo dia atosika / sintonina amin'ny alàlan'ny valizy ifotony ary miditra / mivoaka ny fantsona fitehirizana. Ny valve amin'ny piston dia miasa fotsiny rehefa difotry ny diloilo. Ny fikorontanan'ny tangrui dia novolavolaina tamin'ny menaka ampy hamenoana ny fantsom-boaloboka, na inona na inona fitsangatsanganana na toerana misy azy. Ny fantsona faneriterena dia feno hatrany ...
Fanafihana tampoka amin'ny fampiatoana ny rivotra any aoriana ho an'ny Cerato- Z11051
Ho an'ny kapila isan'andro sy ny mavesatra be eny an-dàlana, ny mpitroka hatairana dia mitazona ny Jeep hilamina tsara ary miaro ny fampiatoana azy. Na mila fanoloana ianao, fanavaozana na fanamboarana feno, Tangrui dia manolotra fihoaran-java-mahavariana mifanaraka amin'ny taona sy maodelin'ny Jeep eny an-tsena. Ny varotra tsara indrindra eto ihany no ilainao amin'ny maha jeeur anao, fantatrao fa ny injeniera kalitao dia manisa ny dia tsara indrindra, ary izahay koa. Ny fanoloana ampahany manaitra anay dia avy amina mpanamboatra ambony avy amin'ny Pro Comp Suspension sy Rubicon Express t ...
Kitapo fanamboarana fiatoana havia havia havia hainganana fiara-tampoka-Z11054
Ny Shock Absorber dia mampiorina ny fihetsiky ny lohataona mihozongozona amin'ny fiatraikany. Mitohy mihombo ny lohataona ary mivelatra rehefa ampiharina ny hery. Ilaina ny mametra ny fivezivezin'ny lohataona mba hampiononana ny mpandeha. Ny Shock Absorber dia mifehy ny fihetsiky ny lohataona amin'ny alàlan'ny fanoherana ateraky ny alàlan'ny solika mandalo lavaka kely amin'ny valizy. ■ Multi Disc Valve System Ny fampihenana ny contol dia novokarin'ny hafainganam-pandeha, habetsahana, sy ny sisa amin'ny solika mandalo ny va ...
INONA NO ATAON'NY MPITONDRA SHOCK? Ny mpitroka tohina dia singa azo antoka amin'ny fiarovana izay mety hisy fiatraikany amin'ny famonoana ny kodiarana, ny fitoniana, ny frein, ny hovitrovitra, ny fampiononana ny mpamily, ary ny ain'ny faritra familiana sy fampiatoana hafa. Ny Vital Function izay manafika ny lohataona amin'ny lohataona ny Shocks dia miasa miaraka amin'ny rafitra fampiatoana ny kamiao ho an'ny lalana amin'ny alàlan'ny fifehezana ny hetsika lohataona. Miaro ny loharano sy kitapo rivotra Miasa miaraka amin'ny loharanon'ny kamio ny kamio - raha malemy ny iray dia ...
Kitapo fanamboarana fiatoana havanana avo lenta avy any aoriana an'ny fiara tampoka-Z11053
Shock Absorber fingotra, Shock Absorber Bolt, Knuckle familiana eo aloha, Hub misy kodiarana, Hood Shock Absorber, Tyre Ball Joint,